इलाम नगरपालिकाकाेे पुष २० गते लगानी सम्मेलन मेयर बस्नेत भन्छन्,‘ लगानीकर्ताहरू, व्यापारिक घरानाहरू उद्योगीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ ’::local sandesh
इलाम नगरपालिकाकाेे पुष २० गते लगानी सम्मेलन मेयर बस्नेत भन्छन्,‘ लगानीकर्ताहरू, व्यापारिक घरानाहरू उद्योगीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ ’
सन्देश सम्वाददाता / बुध, पुस १८, २०७५
इलामको सदरमुकाममा रहेको इलाम नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गर्न कात्तिक २० गते मिति तोकेको थियो । तर, विभिन्न कारणवश लगानी सम्मेलन २ महिना पछि सरेर पुस २० गते हुने भएको छ । यो वर्षको असोजमा लगानी सम्मेलनको होमवर्क गरेको इलामले त्यसको ३ महिनापछि २० गते शुक्रबार लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रदेश १ मै पहिलोपटक कुनै स्थानीय तहबाट हुन लागेको यो नै पहिलो लगानी सम्मेलन हो । सम्मेलनको अवधारणा मेयर महेश बस्नेतको टिमले गरेको हो । मेयर बस्नेतले सम्मेलनको अवधारणा, आवश्यकता र महत्वका विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सारः
अहिले मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बहस चुलिएको छ । सबैले आर्थिक समृद्धिका कुराहरूमा ध्यान दिएको अवस्था छ । तर, आर्थिक समृद्धिको लागि आवश्यक लगानी, पूँजी र प्रविधि स्थानीय स्तरमा भएकोले नपुग्ने देखियो । त्यसैले लगानी सम्मेलनको अवधारणा हाम्रो टिममा आएको हो । लगानी, बजार र रोजगार सिर्जना गर्नलाई सम्मेलन गर्ने सोचेर छलफल चलाएका थियौँ । यही वर्षको असोजमा त हामीले तयारी समिति नै बनाएर काम गर्न थाल्यौँ ।
कुनकुन घराना तथा कस्ता उद्यमीहरूलाई निम्ता गर्नु भएको छ रु कोको आउँदै हुनुहुन्छ ?
लगानी सम्मेलन गर्नुअगाडि केके क्षेत्रमा लगानीको लागि आग्रह गर्न लाग्नुभएको छ र?
हामीले यसको लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सक्नेजति सबै कुरामा छुट दिने छौँ । उदाहरणको लागि घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने राजस्वमा छुट दिने, व्यवसाय करमा छुट दिने, जग्गा उपलब्धतामा छुट दिने, लगानी भएको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सुरक्षा प्रबन्धमा ध्यान दिनेछौँ । साथै, नीतिगत रूपमा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हामीले गर्न सक्ने कामहरू हाम्रो स्थानीय सरकारले गर्नेछ । प्रदेश पोर्टलबाट